कर्णालीका मुख्यमन्त्री र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कँडेललाई काठमाडौँ बोलाइयो
02 Mar 2021 | मंगलबार, १८ फागुन, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
मंगलबार, २७ असोज, २०७७
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने यमलाल कँडेललाई काठमाडौँ बोलाइएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शाही र कँडेललाई थप छलफलको लागि काठमाडौँ बोलाएको हो ।
कर्णालीमा सत्तासंकटपछिको अवस्थालाई साम्य पार्नको लागि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन कँडेललाई निर्देशन दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको औचित्य नभएकोले फिर्ता लिन दुवै अध्यक्षले निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ ।
बालुवाटारमा जारी छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सहभागी रहेको बताइएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्तावबाट पछाडि हटेसँगै मुख्यमन्त्रीको संत्ता संकट हाललाई टरेको छ ।
भारतीय मिडियासँग बाबुराम भट्टराईले भनेः नेपाल संकटबाट गुज्रिरहेको छ
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै नेपाल संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणको लागि भारतको नयाँदिल्लीम
ट्रम्प दम्पतीले कहिले लगाएका थिए कोरोनाको खोप, पूर्व सल्लाहकारले खोले रहस्य
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दम्पतीले कोरोनाविरुद्धको खोप पहिले नै लगाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली झापामाः पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन हुँदै
झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्यान्सर अस्पताल र विपन्न आवासगृहलगायत उद्घाटन गर्न आज झापा आइपुगेका छन् । भद्रपुर विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्य
एजेन्सी । शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन् । पिसाब पोल्नु र पिसाब गर्दा पीडा हुनुजस्ता समस्याले अन्य धेरै रोगको संकेत गर्छ ।
आज घरघरमा स्वस्थानी ब्रत समापन गरिँदै
एजेन्सी । यो विश्व जति सुन्दर रहेको छ, त्यति नै रोचक पनि रहेको छ । तपाईले विश्वसँग सम्बन्धित केही यस्ता रोचक तथ्यहरुबारे सन्नुभएको होला जुन मानिसहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ ।
जान्नुहोस् कुन समयमा निन्द्रा खुल्नुको अर्थ के हुन्छ ?
भाग्य रेखा : हत्केलाका कुन रेखाले के जनाउँछ ?